UManyama akaphumeli obala ngobekumenza angadlali kodwa ujabule ngokubuyela eqenjini leChiefs - Impempe
UManyama akaphumeli obala ngobekumenza angadlali kodwa ujabule ngokubuyela eqenjini leChiefs
January 25, 2021 Impempe.com
Akafunanga ukudalula izizathu athe “ngezakhe yedwa” ebezenza angadlali kwiKaizer Chiefs uLebogang Manyama. Lo mdlali uke wangabonakala kwiMpofana emidlalweni embalwa edlule, kodwa usebuyile futhi ukhombise ukuzimisela kule midlalo emithathu edlule yaMakhosi.
“Ngihlale ngifuna ukudlala ngaso sonke isikhathi kodwa ngenxa yezizathu ezithinta mina uqobo bengingakwazi,” usho kanje uManyama ngoMsombuluko.
“Ngiyilenhlobo ehlala ifisa ukusiza iqembu ngaso sonke isikhathi. Bekunzima kimi ukungadlali kule midlalo yakamuva, kodwa okubalulekile wukuthi iqembu beliwina. Sengibuyile manje futhi ngiyazama ukusiza yize ngingakabi wumqemane ngokugcwele.
“Uma kade ungadlali isikhathi esingamaviki ambalwa kuyabonakala ngakho ngisazama ukubuyela esimweni esifanele,” kuchaza lo mdlali odabuka eTembisa, eGauteng.
Ekubuyeni kwakhe uManyama ufike wawenza umehluko njengoba eseshaye naegoli ngesikhathi bebhuquzisa iTshakhuma Tsha Madzivhandila ngo 3-0 ngempelasonto.
“Kunezimpawu ezinhle zokuthi kuyalunga khona, kodwa kumele ngithathe isinyathelo ngasinye. Ngiyathanda ukusiza iqembu liwine, kungaba ngokuthi ngishaye iphasi ezokwenza uzakwethu ayoshaya igoli, noma ngilishaye mina uqobo.
“Ngesizini edlule ngaba namagoli amaningi futhi ngasiza ozakwethu bashaye amagoli kodwa sekuyisizini ehlukile lena futhi akulula ukudlala njalo ngemuva kwezinsuku ezintathu. Kodwa isimo sinjalo, sidinga ukuzama ukuthi sizinikele ukuze sibe ngcono umdlalo ngomdlalo.
“Ngalesi sikhathi, akubalulekile ukuthi ubani oshaya amagoli thina sizifunela ukuwina nje qha.”
UManyama uzofisa ukuqhubeka nokwenza kahle yena neqembu uma sebebhekene neBaroka eFNB Stadium ngoLwesibili ngo 5 ntambama. Kunegqubu elikhona phakathi kwala maqembu njengoba enomlando wokuphoxana kanzima osuka iBakgaga isadlala esigabeni sama-amesha.
“Ngeke ngiyikhohlwe iBaroka, sonke siyazi kwenzakalani sigcina ukudlala nayo. Bahlezi beyiqembu okunzima ukudlala nalo njengawo wonke amaqembu ePremiership. Uma udlala njalo ngemuva kwezinsuku ezintathu, awukwazi ukuthi uthi kunodlalo noma iqembu elilula ngoba sonke siphushela ukuthi siye emdlalweni olandelayo sesiphumulile futhi siyimqemane.
“Bahluliwe emdlalweni wabo odlule kanti umqeqeshi uhlezi esitshela ukuthi kunzima ukudlala nabantu ababuya endukwini. Kodwa kumele sinake okwethu nokuthi sidinga ukuqinisa kuphi.
“Lo mdlalo ngowethu, sizobe sisekhaya ngakho kumele sikwenze kusisebenzele lokho, bese sithatha amaphuzu aphelele.”
Previous Previous post: Ukhonjwe afika ngayo uLampard obecija iChelsea
Next Next post: Sizokhishelwa umphakathi maduze isinqumo ngonompempe owancisha iCeltic igoli idlala neSundowns